Zimbabwe Yokurudzirwa Kutevedzera Bumbiro reMitemo Zvizere Kana Yoita Sarudzo Dzayo
Zvita 14, 2021
Nyanzvi munyaya dzemitemo nesarudzo dzinoti Zimbabwe inokwanisa kuita sarudzo dzakachena chete kana ikatevedza bumbiro remitemo yaro uye kana mauto akasapindira munyaya dzesarudzo nedzematongerwo enyika.
Vachitaura pamusangano wakarongwa neZimbabwe Democracy Institute kana kuti (ZDI wekuzeya kuti chii chingaitwa kuitira kuti nyika iite sarudzo dzakachena muna 2023, mukuru weSAPES Trust, VaIbbo Mandaza, vati kunze kwekuteedza bumbiro pamwe nekudzorera mauto kumabharaki hapana chimwe chingaitwe kuti nyika iite sarudzo dzisingakipikiswe.
Vati kunyange hazvo vamwe vachiti mutemo wesarudzo unofanira kushandurwa chikuru chiri kuita kuti nyika iite sarudzo dzinopikiswa nguva nenguva inyaya yekupindira kwemauto panyaya dzematongerwo enyika pamwe nekufambiswa zvakanaka kwesarudzo.
Vati mapato anopikisa pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira anofanira kushanda zvakasimba kuona kuti bumbiro remitemo ratevedzwa uye kuti mauto adzokera kumabharaki.
VaMandaza vati hapana chikonzero chekuti mapato anopikisa apinde musarudzo kana bumbiro risingatevedzwi uye kana masoja akaramba achipindira munyaya dzematongerwo enyika sezvo bato reZanu PF richingokunda musarudzo idzi.
VaMandaza vati bato reZanu PF rinoshandisa mauto uye range riri kuruza sarudzo dzese kubva muna2 000 asi richabatsirwa kuramba iri panyanga nemauto.
Izvi zvatsigirwa nemutauriri webato rinopikisa reNational Patriotic Front, VaJelousy Mawarire, avo vati mauto pachawo akabuda pachena apo akabvisa vaive mutungamiriri wenyika, VaRobert Mugabe, muna Mbudzi 2017.
Vachitaurawo pamusangano wanhasi, mutevedzeri wasachigaro webato guru rinopikisa munyika, reMDC Alliance, VaJob Sikhala, vabvumirana naMuzvinafundo Mandaza vachiti Zanu PF haigoni kukunda musarudzo kana ikasashandisa mauto.
Hatina kukwanisa kunzwa divi remauto kana kubva kugurukota rezvekudzivirirwa kwenyika, Amai Oppah Muchinguri Kashiri, sezvo nharembozha yavo yange isiri kuita.
Asi mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muZanu PF, VaTafadzwa Mugwadi, varamba mashoko VaMandaza ekuti bato ravo range richikundikana musarudzo kubva muna 2000 vachiti kunongova kutaura kwevavengi.
VaMugwadi vatiwo manyepo kuti mauto anobatsira Zanu PF musarudzo vachiti mauto anopindira chete kana pachinge paita mhirizhonga.
VaMandaza vatiwo mapato anopikisa pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira anofanira kusunga dzisimbe kuunganidza mari yemaAgents, kuona kuti vanhu vanyoresa kuvhota pamwe nekudzivirira vhoti panguva yesarudzo.
Asi VaMawarire vati mapato anopikisa anokwanisa kukunda chero pasina shanduko yaitika.
Mumwe mushandi mukuru muZDI, VaBekezela Gumbo, vati musangano wanhasi waburitsa pachena kuti kunyange mutemo wesarudzo ukasandurwa, zvakakoshawo kuti bumbiro ritevedzwe uye kuti mauto asapindire musarudzo.
Mutungamiriri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, vakaudza musangano webato ravo wePolitiburo svondo rapfuura kuti Zimbabwe yakatoisa zvese zvinodiwa neSADC kuti paitwe sarudzo dzakachena uye vakati vaye vanochema kuti mutemo wesarudzo unofanira kushandurwa havasi kubuda pachena kuti ndezvipi chaizvo zvavari kuda.
Asi izvi zviri kurambwa nevemapato anopikisa pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira avo vanoti VaMnangagwa vanoziva zvese zvinodiwa kuti nyika iite sarudzo dzakachena.